पूजा र आकाशलाई बेहुला बेहुली हुँदा कस्तो देखियो ? « Mazzako Online
पूजा र आकाशलाई बेहुला बेहुली हुँदा कस्तो देखियो ?
शिशिर राणा निर्देशित फिल्म ‘पोई पर्यो काले’ का केहि तश्बिरहरु बाहिरिएका छन् । फिल्मको पोखामा सुटिङ भैरहेको थियो । पोखराको छायांकन सकेर फिल्म युनिट काठमाण्डौ फर्किएको छ । अब फिल्मको गीत मात्र सुटिङ बाकी रहेको बताइएको छ । पोखराबाट फिल्मका केही तश्बिर बाहिरिएका हुन् ।
फिल्ममा सौगात मल्ल, पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, सृष्टि श्रेष्ठ, सुरक्षा पन्त, सोहित मानन्धर राजाराम पौडेल लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।रेड बर्ड प्रोडक्सनको व्यानरमा निर्माण भएको फिल्म ‘पोइ र्पयो काले’ का प्रस्तुतकर्ता श्यामबहादुर थापा हुन् ।
दिपक मनाङ्गे र देवी राइको लगानी रहेको फिल्ममा किरण नेपाली र रघु परियार कार्यकारी निर्माताको रुपमा रहेका छन् । कमेडी कथावस्तुमा निर्माण हुन लागेको फिल्ममा विन्दा खतिवडा, जयनन्द लामा लगायतको पनि अभिनय छ ।
फिल्ममा शिव ढकालको छायांकन, सुवाष भुषाल र पुरुषोत्तम न्यौपानेको संगीत, कविराज गहतराज, रामजी लामिछाने र रविन शाहको कोरियोग्राफी रहेको छ । ‘पोई पर्यो काले’ कात्तिकको ८ गतेबाट अलनेपाल सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँने छ ।